Warshadda Kale ee Bandhigga Ganacsiga | Shiinaha Bandhigga Ganacsi ee Kale Ayaa Soo Bandhigaya Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Jadwalka Miisaanka Sare waxaa lagu heli karaa 6 'iyo 8' xulashooyin leh qaab daabacan oo banner miis dul-saaran. Astaantaada iyo shaxankaaga ayaa lagu daabacay banner dhar fidsan oo ku daabacan sawiradaada midab firfircoon isla markaana soo jiita dareenka dadka.
Rollup waa mid ka mid ah habka ugu habboon uguna caansan ee loo isticmaalo aaladaha lagu soo bandhigo dhammaan badeecadaha xayeysiinta ah. Way ku fiican tahay gudbinta farriimaha ama sumadaha suuqgeynta. CFM waxay kuu siisaa laba nooc oo ah noocyo isdaba joog ah xulashadaada, nooca caadiga ah iyo midka ugu sarreeya. Sawiradu waa lakab keliya.
Gujis Soo Bax
Haddii aad rabto inaad hesho waxyaabo aan si fiican u soo bandhigi karin shirkaddaada ama alaabadaada, laakiin sidoo kale noqon kara mid wax ku ool ah oo shaqeynaya, qashinka popup waa inuu noqdaa xulasho weyn. Iyada oo dusha sare leh, qolka popup waxaa loo adeegsan karaa sidii shelf shey soo bandhig oo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida rostrum. Dusha sare, waxaad ku daabacan kartaa sawirada, hal ku dhigyada iyo noocyada aad jeceshahay.